Dhammaan qandaraasyada aan la leenahay macaamiisheennu waa hawlgal bille ah. Marar aad u yar ayaynu ku raad joognaa mashruuc go'an oo waligay kuma ballan qaadi karno waqtiga. Taasi waxay cabsi u noqon kartaa qaar laakiin arinta ayaa ah in ujeedku uusan noqonin taariikhda la siidaayo, waa inay noqotaa natiijooyinka ganacsiga. Shaqadeenu waa inaan helno macaamiisheena natiijooyinka ganacsiga, ma ahan inaan qaadno dariiqyo si aan u sameysano taariikhaha bilaabista. Maaddaama Healthcare.gov ay wax baranayso, taasi waa waddo u horseedi doonta rajooyin la seegay.
Si loo iskudayo loona ilaaliyo macaamiisha mashaariicda waqtigeeda, waxaan u kala saareynaa shuruudaha waa inay lahaadaan (qancinta natiijooyinka ganacsiga) oo ay fiican tahay inaan helno (Ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah) Sidoo kale waligeen jadwal uma qabano waqtiga la sii deynayo maadaama aan ognahay inay had iyo jeer jiri doonaan xoogaa isbeddelo ah oo loo baahan yahay.
Dhismaha Macluumaadka aan si dhab ah loo qaadan. Badanaa, wakaaladaha waaweyni waxay waydiin doonaan waratada inay soo gudbiyaan dalab ku saabsan RFP oo ay si buuxda uga boodaan nidaamka Dhismaha Macluumaadka oo u boodaya midig horumarka iyadoo aan la fahmin ama lagu heshiin baaxadda. Tani waa wax weyn, fool xun, waqti lumis, lacag lumis, qalad. Aad ayey qiimo ugu fadhidaa naqshadaha inta badan codsi ee aad horay u sii wadi karto oo aad u diyaar garowdo inaad noqoto mid dhaqdhaqaaq leh oo dabacsan oo ku saabsan waxyaabaha aan horay loo sii saadaalin karin ka hor intaadan bilaabin barnaamijkeeda (tani waxay la mid tahay dhisida guri bilaa qorshe ah). Iibiyeyaasha ayaa loogu talagalay inay ka dhammaadaan miisaaniyadda oo ay bilaabaan inay jaraan dhinacyada haddii aan tan si sax ah loo samayn.